अपराध अनुसन्धानका ‘सुपरस्टार कुकुर’: कहाँबाट ल्याइन्छ, कति मूल्य पर्छ ? (भिडियो) - inaruwaonline.com
अपराध अनुसन्धानका ‘सुपरस्टार कुकुर’: कहाँबाट ल्याइन्छ, कति मूल्य पर्छ ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १६, २०७५ समय: ८:४९:०३
‘सुपरस्टार कुकुर’ कहाँबाट ल्याइयो, कति मूल्य पर्छ ? नेपाल प्रहरीको कुकर तालिम केन्द्रभित्र अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील कतिपय कुकुर नेपालमै उत्पादन भएको हो भने भने कतिपय विदेशबाट आयात गरिएको हो । नेपालमा अपाराध अनुन्धानमा सघाउन अमेरिका, भारतलगायत देशबाट कुकुर आयात गरिएको छ । त्यस्तै, एउटा कुकुरको मूल्य बच्चा अवस्थामा ३५–४० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म परेको छ । अपराध अनुसन्धनका क्षेत्रमा अब्बल मानिएका केही कुकुरको मूल्य र उत्पादन भएको देशबारे बुझौं ।
नाम : जोली
जात : ब्लड हाउण्ड
मुल्य : ७ लाख रुपैयाँ
उत्पादन भएको देश : बेलारुस
जात : डच् सेफर्ड
मूल्य :२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (बच्चा)
उत्पादन भएको देश : अमेरिका
नाम : डेनी
जात : विगल
मूल्य : २ लाख ५० हजार रुपैयाँ (बच्चा)
उत्पादन भएको देश : भारत
नाम : लिजा
जात : जर्मन सेफर्ड
मूल्य : ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ (बच्चा)
उत्पादन भएको देश : नेपाल
नाम : रेस्क्यु
जात :जर्मन सेफर्ड
मूल्य : ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ ( बच्चा)
नाम : सिया
जात : गोल्डेन रिट्रिभर
नाम : ब्रुक
जात : ल्याब्रोडर
मूल्य ; ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ (बच्चा)
नाम : जुलेट
मूल्य :३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ (बच्चा)
नाम : भुन्टी
यी लगायत बेल्जिएन सेफर्ड र ककर स्पानियल प्रजातिका कुकुर पनि नेपाल प्रहरीसंग छ । जसले सँघ्ने, सुन्ने, हेर्ने र स्मरण गर्न सक्ने विशेष क्षमता राख्दछ । जुनशक्तिलाई तालिममार्फत अपराधी पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ । विशिष्ट क्षमता भएका ८ प्रजातिका कुकुर नेपाल प्रहरीसँग छ ।
कुकुरहरु हेर्दा जति फरक फरक छन्, उनीहरुको क्षमता पनि फरक हुन्छ । कुनै कुकुर विपद्का समयमा उद्दारका लागि प्रभावशाली हुन्छन् भने कुनै अपराधी पहिचान गर्न । कुकुरको गुणअनुसार नै तालिम प्रदान गरिन्छ । र, पोख्त बनाइन्छ ।
सँगै ईमानदारिता, बफारिता र कर्तव्यनिष्टपन पनि कुकुरको विशेष गुण हो । जसकारण कुकुरलाई सजिलै तालिम दिन सकिन्छ । र, सिकेको कुरालाई कुकुरले इमानदारपूर्वक प्रयोग गर्छ । त्यसैले प्रहरीका लागि अहिले तालिमप्राप्त कुकुर सारथिसिद्ध भएको छ ।
तर नेपालमा तालिमको व्यवस्था छैन
नेपाल प्रहरीसँग अहिले ८० ओटा तालिम प्राप्त कुकर छन् । जसलाई प्रहरीले अपराध अनुसन्धान, खोजी तथा उद्दार, भीड नियन्त्रण तथा सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले नसकेका थुप्रै अनुसन्धान कुकुरको सहयोगबाट सफल भएको छ । अहिले नेपाल प्रहरीले प्रयोग गरिरहेका अधिकांश कुकुर स्वदेशी उत्पादन हो । कतिपय विदेशबाट आयात गरिएको छ । खासगरी भारत, अमेरिका र बेलारुसबाट नेपाल प्रहरीले कुकुर ल्याएको छ । प्रायः ती देशले नेपाल प्रहरीलाई सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको कुकुर नै अहिले प्रहरीको सारथि भएको छ ।
कुकर विदेशबाट आयात गर्दा महंगो पर्ने भएकाले अहिले स्थानीय कुकुरलाई नै तालिम दिने अभ्यास सुरु भएको छ । तर, नेपालका कुकुरलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने गरी तालिम दिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
कुकुरलाई सुरक्षा तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने चलन नौलो होइन । प्राचिनकालदेखि नै अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग भएको इतिहास छ । नेपाल प्रहरीले भने अनुसन्धानका लागि २०२६ सालपछि मात्रै कुकुरको प्रयोग गर्न थालेको हो । मलेसिया सरकारले दुई वटा कुकुर उपहार दिएपछि मात्रै प्रहरीले सुरक्षा र अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग गर्न थालेको हो ।
२०३२ सालमा तत्कालिन प्रहरी नायब निरीक्षकसहित १० जनाको दरबन्दीमा ‘कुकुर शाखा’ स्थापना गरिएको हो । २०४७ सालमा कुकुर सेवा देशभरी विस्तार गर्न केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम केन्द्र बनाइयो र ५ वटै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा कुकुर शाखा स्थापना भयो । अहिले कुकुर शाखालाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार विभाजन गरिएको छ ।
बाईट…शैलेश थापा, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
प्रादेशिक तहमा भएका कुकर शाखालाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्न सके अपराध अनुसन्धान सहज हुने प्रहरी बुझाई छ । २०२६ सालकै संरचनामा धेरथोर परिवर्तन भएर अहिले पनि कुकर स्कूल संचालनमा छ । तर कुकुरलाई तालिम दिने स्थानको अभाव छ । तालिम दिनेजनशक्ति पनि छैन । यदी कुकुरलाई प्रभावकारी तालिम प्रदान गर्न सके अपराध अनुसन्धानसँगै अपराध न्यूनीकरणमा निकै सजिलो हुने प्रहरी अधिकृतको भनाई छ ।
बिडम्बना यो पनि छ कि, कुकुरले गरेको अनुसन्धानलाई अदालतले आधिकारिक मान्दैन । कुकुरले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहज बनाउने हो, न कि कुकुरले नै सबै कुरा प्रमाणित गर्न सक्छ । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने अमेरिकी अदालतले चाहिँ कुकुरले गरेको अनुसन्धानलाई तुलनात्मक रुपमा बढी मान्यता दिन्छ ।
कुकुरले कोही अपराधी भए, नभएको प्रमाणित गर्दैन, यद्यपि, प्रहरीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहज बनाउँछ । नेपालमा अनुसन्धान गर्ने कुकुरको संख्या बढाउने र आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने हो भने अपराध न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । साभार श्राेतः न्यूज२४नेपाल